Top 15 Phần mềm chụp màn hình máy tính Miễn Phí | Muasalebang - Muasalebang
Top 15 Phần mềm chụp màn hình máy tính Miễn Phí | Muasalebang
Camera 0 lượt xem 14/04/2022
Đang Đọc: Top 15 Phần mềm chụp màn hình máy tính Miễn Phí | Muasalebang in Muasalebang
Ukuze uthwebule, wenze ikhophi yasenqolobaneni ngokushesha futhi uhlele izithombe ezibalulekile nokuqukethwe okuboniswayo njengamanje, uhlelo lokusebenza lokuthwebula isikrini sekhompyutha wazalwa. Ngakho yiziphi isofthiwe yamahhala engcono kakhulu etholakalayo namuhla? Yiziphi izici ezivelele zohlobo ngalunye? Ake sithole lesi sihloko esingezansi.
1 Isoftware eyi-10 ephezulu yamahhala yokuthwebula isikrini sekhompyutha, i-PC
1.1 1. Isoftware ye-Snagit (Yamahhala)
1.2 2. Isofthiwe ye-Camtasia (Yamahhala)
1.3 3. Isoftware yokuthwebula i-FastStone (Yamahhala)
1.4 4. I-Greenshot Software (Yamahhala)
1.5 5. Ithuluzi Lokuhlwitha (Mahhala)
1.6 6. Isofthiwe ye-Jing (Yamahhala)
1.7 7. I-Skitch Software (Yamahhala)
1.8 8. Uhlelo lokusebenza lokuthwebula isikrini sekhompyutha ye-TinyTake (Mahhala)
1.9 9. Uhlelo lokusebenza lokuthwebula isikrini sekhompyutha ye-Lightshot (Mahhala)
1.10 10. Uhlelo lokusebenza lwedeskithophu ye-ScreenPresso (Mahhala)
2 Top 5 khulula screen ukuqoshwa software on amafoni
2.1 1. Isicelo se-Recme Screen Recorder
2.2 2. Uhlelo lokusebenza lwe-Google Play Imidlalo
2.3 3. Uhlelo lokusebenza lwe-Screen Recorder
2.4 4. Uhlelo lokusebenza lwe-MNML Screen Recorder
2.5 5. Uhlelo lokusebenza lwe-Screen Cam
Isoftware eyi-10 ephezulu yamahhala yokuthwebula isikrini sekhompyutha, i-PC
1. Isoftware ye-Snagit (Yamahhala)
Njengohlelo lokusebenza lokuthwebula isikrini oluvela enkampanini yesoftware i-TechSmith, i-Snagit yakhiwe eduze kwesidingo sokucutshungulwa kwesithombe okulula. Ngaphandle kokuthatha izithombe-skrini, i-Snagit iphinde ibe nezinye izici ezivelele njenge:
Umsebenzi we-Preview uvumela ukusekela ukusondeza kunoma iyiphi indawo esithombeni.
Hlela kalula umthamo, imiphumela ekhethekile, futhi abasebenzisi bangangeza amanothi, basebenzise izithonjana zemicibisholo kanye nezinye izithonjana eziningi ukuze bagqamise okuqukethwe okudinga ukunakwa. Lokhu kuthuthukisa ukusebenza kahle kokudlulisela lapho wabelana ngolwazi nabangane, osebenza nabo noma amakhasimende.
I-Snagit iphinde ivumele ukuqoshwa kwesikrini sekhompyutha nokwabelana ngemisebenzi elula kakhulu.
Isoftware isekela izilimi eziningi, ingasetshenziswa kuzo zombili izinhlelo zokusebenza zeWindows neMac.
Izinkokhelo: cishe i-1,160,000 VND ($49.99)
Landa i-Snagit ye-Windows
Landa i-Snagit ye-Macbook
I-HP Pavilion 15-EG0506TU i5-1135G7 46M04PA ikhompuyutha ephathekayo enesikrini esikhulu esingu-15.6-intshi, i-8GB ye-RAM, ukusebenza okunamandla, imisebenzi eminingi emihle yokufunda nge-inthanethi noma ukusebenza ekhaya, akukho mkhuba wokugogeka.
2. Isofthiwe ye-Camtasia (Yamahhala)
I-Camtasia enomsebenzi wokuqopha ngokuqondile kwi-Webcam ivumela ukuthatha izithombe-skrini ezibukhali ngokwedlulele. Ngaphezu kwalokho, lolu hlelo lokusebenza lwenza kube lula ukwenza izifundo zevidiyo, imihlangano noma izikhathi zokufundisa eziku-inthanethi. Ihambisana nesitolo semisindo yamahhala yokuhlela ividiyo. I-Camtasia futhi isekela izihloko, amagama-ncazo… futhi ingenise amaslayidi e-PowerPoint ngokuqondile.
3. Isoftware yokuthwebula i-FastStone (Yamahhala)
Njengoba isofthiwe ithuthukiswa ngenjongo yokusekela ukuthwebula isikrini sekhompyutha, i-FastStone Capture inezinhlobo ezihlukahlukene zezindlela zokudubula ezifana nalezi: Ukuthwebula isikrini esigcwele, ukuthwebula i-engeli… Ngokusebenza okubonakalayo, okhiye bomsebenzi baboniswa ngokucacile. Kumhleli we-FastStone uzothola amathuluzi okushintsha usayizi wezithombe, ukunqampuna izithombe, ukufaka ama-watermark (ama-watermark), wengeze imicibisholo, amagama-ncazo, imiphumela ekhethekile… Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukuvula isofthiwe kumadivayisi angaphandle njenge-USB, i-SSD, i-HDD ephathekayo. Futhi ukukhokha u-$19.95 ukusebenzisa le softhiwe emangalisayo unomphela kuwufanele ngempela.
Landa i-FastStone Capture
4. I-Greenshot Software (Yamahhala)
I-Greenshot isofthiwe yokuthwebula isikrini sekhompiyutha yamahhala nengumthombo ovulekile engathwebula isikrini esigcwele nanoma iyiphi indawo ngokuhudula nokuwisa. Ezinye zezici ezivelele zalolu hlelo lokusebenza yilezi:
Umthamo wokukhanya, usekelo lwesistimu yokusebenza yeWindows.
Kulula ukufaka nokusebenzisa.
Kunezindlela eziningi zokuthwebula ukuhlangabezana nezinhlobonhlobo zokusetshenziswa, futhi uhlelo lokuhlela isithombe luyatholakala kusofthiwe.
Izithombe ngemva kokuthatha zingathunyelwa nge-imeyili, iphrinta…
Ukusekelwa kwezilimi eziningi.
Landa i-Greenshot kukhompyutha yakho
5. Ithuluzi Lokuhlwitha (Mahhala)
Lolu uhlelo lokusebenza lokuthwebula isikrini olufakwe ngaphambili ukuze lusekele i-Windows Vista nezinguqulo zakamuva ze-Windows. Ithuluzi lokuhlwitha hhayi kuphela mahhalakulula ukuyisebenzisa kodwa futhi iletha izinzuzo eziningi kubasebenzisi abanezici ezivelele ezifana nalezi:
Kunezindlela eziningi zokuthwebula isikrini njengalezi: ukuthwebula iwindi lesoftware, ukuthwebula isikrini esigcwele, ukuthwebula kwamahhala …
Ivumela ukuhlela izithombe ngamakhrayoni, amaphuzu avelele…, gcina nge-PNG, i-GIF kanye namafomethi e-JPEG futhi wabelane ngawo.
Ungakwazi ukunamathisela izithombe kwenye isofthiwe efana Photoshop, Paint.
Landa i-Snipping Tool ye-Windows
>>> Bona okuningi: Ungasithatha kanjani isithombe-skrini kukhompyutha
6. Isofthiwe ye-Jing (Yamahhala)
Ithuthukiswe inkampani yesofthiwe i-TechSmith, i-Jing isofthiwe ekhethekile esetshenziselwa ukuthwebula izithombe, ukuhlela kanye nezinjongo zokwabelana ngesikrini. Ngenxa yokuthi uhlelo kulula ukulusebenzisa futhi alunamali ngokuphelele, i-Jing ithandwa ngabasebenzisi. I-Jing ivumela ukwabelana ngesixhumanisi esilayishwe ngokuqondile ku-Screencast.com. I-Jing Pro isiza ukususa ilogo futhi inezici ezithile ezikhethekile uma iqhathaniswa nesofthiwe evamile ye-Jing.
7. I-Skitch Software (Yamahhala)
Leli ithuluzi lokuthwebula isikrini sekhompyutha elakhiwe yi-EverNote yezinhlelo ze-Mac neWindows. Le software yamahhala iyatholakala nakumadivayisi eselula. Ngesethi yamathuluzi esichasiselo, i-Skitch yenza kube lula ukumaka izindawo ozifisayo ezithombeni futhi uzigcine. Futhi, izithombe-skrini zingalayishwa noma zinamathiselwe ku-imeyili. I-interface yesofthiwe ilula kakhulu, nazo zonke izinketho zokuhlela ziboniswa kumenyu eyodwa.
Landa i-Skitch kukhompyutha yakho
8. Uhlelo lokusebenza lokuthwebula isikrini sekhompyutha ye-TinyTake (Mahhala)
I-TinyTake isofthiwe yokuthwebula isikrini sekhompuyutha ephathekayo eyakhiwe inkampani yeMangoApps. Ukuze uthathe isithombe-skrini ngale softhiwe, udinga nje ukuhudula bese uphonsa igundane endaweni oyifunayo.
Izinzuzo ze-TinyTake zingashiwo kanje:
Isekela ukuthwebula isikrini kwamakhompyutha namakhompyutha aphathekayo.
Thatha isithombe sesikrini esigcwele noma thwebula indawo.
Izithombe zingathathwa ngekhamera yewebhu.
Yenza ngokwezifiso kalula, londoloza kukhompyutha yakho noma yabelana ngezinkundla zokuxhumana, thumela ngewebhu, ngemeyili, ngephrinta noma ngediski komunye nomunye.
Landa i-TinyTake ekhompyutheni yakho
9. Uhlelo lokusebenza lokuthwebula isikrini sekhompyutha ye-Lightshot (Mahhala)
Lokhu kungashiwo njengohlelo lokusebenza olujwayeleke kakhulu lokuthwebula isikrini sekhompyutha phakathi kwezinhlelo zokusebenza zamanje zokusekela ukuthwebula isikrini. Uhlelo lokusebenza lusiza abasebenzisi ukuthi bathwebule isikrini ngokushesha, benze ngokwezifiso izindawo abangazithwebula kalula. I-Lightshot manje isiwuhlelo lokusebenza Ukuthwebula isikrini sekhompyutha ye-MacbookIWindows isetshenziswa abantu abaningi.
Izinzuzo zesoftware ye-Lightshot:
Isithombe-skrini esisheshayo. Ungakwazi ukudubula futhi uhlele ngesikhathi esifanayo.
I interface yomsebenzisi-friendly, kulula ukuyisebenzisa.
Kukhona imisebenzi ehlanganisiwe eyengeziwe engokwezifiso njengokwengeza umbhalo, imicibisholo, imiphumela, …
Ukusekelwa ku-Windows, Mac, Firefox, Opera, Google Chrome kanye neziphequluli ze-Internet Explorer.
Izithombe ezithathiwe ezekhwalithi ephezulu.
Ayithathi isikhala ngisho noma isebenza ngemuva kudivayisi.
Landa i-Lightshot kukhompyutha yakho
10. Uhlelo lokusebenza lwedeskithophu ye-ScreenPresso (Mahhala)
Ngokufanayo, i-ScreenPresso inekhono lokuthatha isithombe-skrini ngokushesha futhi kalula sedeskithophu enemisebenzi ehlukahlukene yokusekela eyaziswa kakhulu amakhasimende.
Izici ezivelele zesoftware ye-ScreenPresso:
Buyisela umhleli wesithombe, gqamisa ngemicibisholo, amabhamuza, umbhalo.
Londoloza ngokuzenzakalelayo isithombe esithwetshiwe.
Isekela ukuguqula amafomethi ahlukahlukene wefayela: PDF, HTML,…
Thumela idatha ngokuzenzakalelayo kumasevisi ayi-14 aku-inthanethi.
Isekela izilimi ezingu-19 ezahlukene.
Isekela izinguqulo ze-64-bit ze-Windows ze-Windows 7, i-Windows 8 ne-Windows 10.
Landa i-ScreenPresso kukhompyutha yakho
Top 5 khulula screen ukuqoshwa software on amafoni
1. Isicelo se-Recme Screen Recorder
I-Recme Screen Recorder ikalwe njengenye yesoftware esebenza kahle futhi elula yokuqopha isikrini sefoni etholakala namuhla. Bangakwazi ukuqopha umsindo ngaphakathi nangaphandle kwevidiyo. Ikakhulukazi, ividiyo erekhodiwe ingafinyelela ku-60fps 1080p.
Izici ezivelele zeRecme Screen Recorder:
Kuhle, kusebenziseka kalula.
Izinga levidiyo etholiwe lisezingeni.
Amandla okurekhoda okulalelwayo aphelele: ngaphakathi nangaphandle kwevidiyo.
Landa i-Recme Screen Recorder ku-CH Play
2. Uhlelo lokusebenza lwe-Google Play Imidlalo
Uhlelo lokusebenza lokuthwebula isikrini olulula kakhulu lwamadivayisi e-Android ongeke waziba i-Google Play Games. Uhlelo lokusebenza luvumela ukuqoshwa kwesikrini ngezinqumo ezi-2 ze-480p ne-720p.
Izici ezivelele ze-Xsplit:
Itholakala endaweni futhi akukho ukulanda okudingekayo.
Ukucushwa okuzenzakalelayo kusebenza kahle.
Ikhwalithi yesithombe/ividiyo ezinzile, ukusebenza kahle okunezindlela ezi-2 i-480p ne-720p.
Thola i-Google Play Game ku-CH Play
3. Uhlelo lokusebenza lwe-Screen Recorder
Kulabo abangabanikazi be-smartphone, isici sokuthwebula isikrini siyisici esibalulekile, esisetshenziswa nsuku zonke. Ngohlelo lokusebenza Lwerekhoda Yesikrini kuphela kuzoba lula kunangaphambili. I-Screen Recorder ivumela ukuqoshwa ngokulungiswa okungu-60fps kuza nezinye izici eziningi ezifana nokwenza ngokwezifiso amalogo engeziwe, izithombe nombhalo.
Izici ezivelele ze-Screen Recorder:
Mahhala, azikho izikhangiso
Ukusebenza okusheshayo, okulula, okulula.
Ingarekhoda ngemodi yosuku noma yasebusuku.
Ifakwe izici ezinhle zokuhlela ezifana nokunqampuna, izinketho zokurekhoda, ukufaka amalogo, izithombe, umbhalo.
Landa Isiqophi Sesikrini ku-CH Play
4. Uhlelo lokusebenza lwe-MNML Screen Recorder
Yize isesigabeni sokuqedwa, kodwa i-MNML Screen Recorder ihlangabezana nazo zonke izici zohlelo lokusebenza olusekela ukuqoshwa kwesikrini okusebenzayo. Isivinini sokuqoshwa kwesikrini sifika ku-60fps, i-bit rate ifika ku-24Mbps, ukulungiswa kukhawulelwe ku-1080p.
Izici ezivelele ze-MNML Screen Recorder:
Azikho izikhangiso futhi alukho uhlelo lwezinkokhelo.
Isivinini sokurekhoda esisheshayo.
Ukulungiswa kusezingeni eliphezulu uma kuqhathaniswa nesofthiwe engaphelele.
Landa i-MNML Screen Recorder ku-CH Play
5. Uhlelo lokusebenza lwe-Screen Cam
Ibhekisela kusiqophi sesikrini socingo esilula, esikhululekile futhi esingenazo izikhangiso, akunakwenzeka ukuba uzibe igama elithi Screen Cam. Uhlelo lokusebenza lunamandla okushintsha i-bitrate yevidiyo, ukulungiswa kwesithombe sevidiyo kanye nezinga lozimele olifunayo (kufika ku-60 fps).
Izici ezivelele ze-Screen Cam:
Umthamo wokukhanya, azikho izikhangiso.
Lungisa i-bitrate yevidiyo, ukulungiswa nezinga lozimele kalula.
Lawula ukurekhodwa kunoma yisiphi isikrini.
Landa i-Screen Cam ku-CH Play
Ngethemba ukuthi isihloko esingenhla sinikeze ulwazi oluwusizo mayelana ne uhlelo lokusebenza lokuthwebula isikrini sekhompyutha okungcono kakhulu namuhla. Cabangela izici ofuna ukuzisebenzisa ukuze ukwazi ukuzikhethela umsizi omuhle!
Uma ufuna ukwazi okwengeziwe ngamakhompyutha aphathekayo atholakalayo njengamanje kwa-Nguyen Kim, sicela usithinte ngokushesha ngokusebenzisa iziteshi ezilandelayo ukuze uthole ukwesekwa okusheshayo:
Inombolo yocingo: 1800 6800 (mahhala)
Xoxa: Facebook NguyenKim (nguyenkim.com) noma Iwebhusayithi Nguyenkim.com
I-Nguyen Kim Shopping Centre ezweni lonke
Xem Thêm Máy Ảnh Canon EOS 6D Mark II Giá Tốt | Muasalebang
Máy nước nóng lạnh Kangaroo KG40N | Muasalebang
Hướng dẫn chơi đội hình Ác quỷ Tà Thần ĐTCL 11.14 | Muasalebang
Máy Ảnh Canon EOS 3000D Kit EF-S 18-55 III | Muasalebang
Máy ảnh CANON EOS 5D MARK II | Muasalebang
Máy ảnh Canon EOS 600D với ống kính 18-55 IS II màu đen giá tốt tại nguyenkim.com | Muasalebang